All posts tagged "Hpa-An"
Jovago | June 2, 2017
ဘားအံဟာ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက် ၂၇၀ ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဇွဲကပင်တောင်၊ တောင်ဝိုင်းတောင်၊ ကျောက်ကလပ်၊ ဆန္ဒန်ဂူ၊ ကော့ကွန်းဂူ ၊ ရသေ့ရဂူ၊ ဘုရင့်ညီဂူ စသဖြင့် များပြားတဲ့ လည်ပတ်စရာ နေရာတွေနဲ့ စိမ်းလန်းသာယာတဲ့...
Jovago | May 12, 2017
I often tell about the travel and food but I never mentioned before about the waterfall. Apparently, Myanmar...
Jovago | May 11, 2017
မြန်မာပြည်ကအလှဆုံးရေတံခွန် ၆ ခု
ခရီးသွားနေရာတွေ၊အစားသောက်တွေအကြောင်းမကြာခဏပြောဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ကလှပတဲ့ရေတံခွန်တွေအကြောင်းကိုတော့ တခါမှမပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။တကယ်တော့တောတောင်ရေမြေသဘာဝအလှပတွေပေါများတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ သာယာ လှပတဲ့ရေတံခွန်တွေလည်းအမျာကြီးရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ရေတံခွန်အများကြီးထဲကမှ အလှပဆုံးရေတံခွန် ခြောက်ခုအကြောင်းကို ခရီးသွားလမ်းညွှန်အဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တောကျယ်ရေတံခွန် တောကျယ်ရေတံခွန်ဟာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရွာငံဒေသအနီးတောကျယ်ရွာမှာတည်ရှိပါတယ်။ မြသပိတ်ရေပြာအိုင်ကနေသွားမယ်ဆိုရင် ငါးမိနစ်လောက်ပဲကြာပြီး တော်တော်နီးပါတယ်။...
Jovago | March 28, 2017
သဘာဝ အလှပတွေရှိတဲ့ ဘားအံမြို့ကို လည်ပတ်ရအောင်
ဘားအံမြို့အကြောင်း ဘားအံဟာ ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက် ၂၇၀ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ဘားအံ မြို့မှာ လူဦးရေလေးသိန်းကျော်နေထိုင်ပါတယ်။ ဒေသခံလူအများစုက ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဘားအံရဲ့ ရာသီဥတုကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအမြဲလိုလို...
City guide to beautiful Hpa An
About Hpa-An Hpa-An is the Capital city of Kayin State of Myanmar. It is located 270 Kilometre away...
Jovago | December 24, 2016
Jovago အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခြင်း တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနှင့် အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်များ ကို ဆုရွေးချယ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြင်သစ်အခြေစိုက် အွန်လိုင်းဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် Jovago အနေဖြင့် ၂၀၁၅ စက်တင်ဘာ မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာတွင် လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူ မီဒီယာများ အားမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Jovagoသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိခရီးသွားများအနေဖြင့် ခရီးသွားလာရာတွင် online...